Posted by မေဓာဝီ at 7:34 AM
All the events in the past came into my mind-eye: my childhood, school time. Union day was celebrated in Yangon and Independent day was celebrated in Mandalay, near Mandalay Hill. fortunately i participated in these celebration happily. Now Ma May's post recalled me to these historical events of our country. No one should forget these historical events. We, all Burmese, must open our eyes, alert our ears, to regain our rights, to rebuild our union with our knowledge. if we do not know or easily forget these events, how can we regain our rights? so we all have responsibility for our future like Ma May reminded. Here i also would like to remind all Myanmar not to forget all historical events of our country by our historical Doctor Than Tun's word: why we learn the history is not to be blind! Thanks Ma May, for reminding all Myanmar by this post !!!
ကျွန်တော် ဘလောက်တွေကို လိုက်ကြည့်တယ်ဗျ.. ဘယ်သူများ ပြည်ထောင်စုနေ့ကို မှတ်မှတ်ရရ တင်ထားမလား…အလုပ်ပဲရှုပ်နေကြလို့လား.. … အင်း.. မနက်ဖြန်ဆိုရင် ဗိုလ်ချုပ်မွေးနေ့ရောက်ပြန်ပြီ… မေ့ပဲမေ့နေကြလို့လား …… ချစ်သူများနေ့ကိုတော့ လူတော်တော်များများသတိတရရှိကြသားပဲ..
မမေဓါဝီတစ်ယောက်ပဲ ပြည်ထောင်စုနေ့အကြောင်းတင်ထားတာတွေ့ရတယ်… ကောင်းတယ်ဗျာ..
ရင်ထဲက ဒို့အရေးပါ မမေဓာ။
မြန်မာတွေ စည်းကမ်းဖောက်လို့ ထီးနန်း ပျောက်ခဲ့ရပြီးပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ တိုင်းရင်းသား ခေါင်းဆောင်များ ပူးပေါင်း စည်းလုံးခဲ့လို့ လွတ်လပ်ရေးဆိုတာ ရခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် စည်းကမ်း မရှိ၊ ညီညွတ်မှု မရှိခဲ့လို့ တရား မျှတသော လွတ်လပ်ရေး ဆိုတာကို မြန်မာ ပြည်သူတွေ မခံစားရပါဘူး။ ပြည်ထောင်စုနေ့ ဆိုတာ စည်းလုံး ညီညွတ်ခြင်းကို ဖေါ်ဆောင်တဲ့ နေ့လို့ နားလည်ထားပေမယ့် မြန်မာ ပြည်သူများကတော့ မစည်းလုံးတာ စိတ် မကောင်းစရာပါပဲ။ အကျင့်စာရိတ္တ ပျက်စီးတာတွေ၊ ကိုယ့်ကျင့် တရားတွေ ပျောက်ပျက်ကုန်တာတွေ မြင်ရ ကြားရတာလည်း ဝမ်းနည်းဖို့ ကောင်းပါတယ်။
“နှစ်ယောက်ပေါင်းတော့ သုံးစုကွဲ၊ အဲဒါ ဗမာပဲ” လို့ ဆိုရလောက်အောင် ဖြစ်နေတာတွေ ပြင်နိုင်ကြရင် ကောင်းမှာပဲဗျာ။
ရင်ထဲက မပါတဲ့ “ဒို့အရေး” တွေ မကြားရတာကိုတော့ မလွမ်းပါဘူး။
2/12/2007 6:33 PM
ခုခတ်က ပါးစပ်ဟလိုက်တာနဲ့ ဖမ်းမယ်ချည်းပဲ လုပ်နေလို့
လစ်ထဲမှာ နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်သွားမှာစိုးလို့ အသံတိတ် ဒို့အရေးလုပ်
နေတာပါ။ ဒီနေ့ရောက်မှ ဒီနေ့ကို သတိရမယ်ဆိုရင် သတိရတဲ့
နှစ်တွေသာ တိုးသွားမယ်...ဒုံးရင်းက ဒုံးရင်းပါပဲ.....တို့ဗမာရယ်။
ဒီနေ့မရောက် ဟိုနေ့မရောက်လဲ ဒို့အရေးတွေ လုပ်နိုင်ကြပါစေ
ပြည်ထောင်စုနေ့ဆိုတာကို မမေ့တာသေချာပေမယ့် ပို့စ်မတင်ဖြစ်တာကတော့ အပြစ်တခု မဟုတ်ပါ။ အရေးကြီးတာက ရင်ထဲက စိတ်ဓာတ်တွေ တကယ်ကို ကိန်းအောင်းရှင်သန်နေဖို့ပါ။ ပုံစံမတူတဲ့ ဒို့အရေး တွေကြားမှာ ကျနော်တို့ ဘယ် ဒို့အရေး လုပ်မလဲ ဆိုတာပါပဲ။
2/14/2007 2:15 AM
2/17/2007 6:11 AM
i think our country will develop when than shwe & his friends die.
ပြည်ထောင်စုနေ့မှာ ပို့စ်မတင်တာ အပြစ်မဟုတ်
မှ ပြည်ထောင်စုစိတ်ဓါတ်လေးကို အမှတ်မရနိုင်